Intsomi yaseNtabeni-iKhaya leHolide kunye nezitya ze-SPA
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJasmina
Iinkwenkwezi ezine chalet emi emahlathini kwaye inombono wentaba. Ubungakanani be-92 m2 bubandakanya indawo ye-SPA (i-sauna kunye ne-tub eshushu), igumbi lokuhlambela, indlu yangasese eyahlukileyo, amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala elinomlilo, ikhitshi kunye negumbi lokudlela. Ineyadi ebanzi evulekileyo enebala lokudlala labantwana kunye ne-grill evulekileyo.
Ipropathi ime kwindawo yeentaba yeGorski Kotar ebonelela ngokunyuka intaba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokunyuka intaba. Kulo mmandla kukho iipaki zesizwe ezimbalwa, iipaki zendalo, iindawo ezibonwayo kunye neendawo eziphawulwayo.
I-chalet epholileyo enendawo ye-SPA, indawo yomlilo, ukufudumeza umgangatho, i-intanethi yesantya esiphezulu, i-smart TV eneenkonzo zokusasaza. Kufuphi kukho iindawo ezimbalwa zohambo lwendalo ezaziwayo-Kamačnik canyon, Green Whirlpool kunye neDevil's Passage.
Kwilali ngokwayo kukho inqaba endala
Umbuki zindwendwe ngu- Jasmina